Agbakwunyere SC eriri ngwa ngwa njikọ, China agbakwunyere SC eriri ngwa ngwa njikọ Manufacturers, Suppliers, Factory - Qingdao etinyere photonic teknụzụ co., Ltd
>lọ>Product>Usoro FTTH>Embeded SC Ndenye njikọ > Nkọwa zuru ezu
Agbakwunyere SC eriri ngwa njikọ
A na-akpọkarị eriri fiber optic, nke a na-akpọkarị njikọ fiber optic, dị ka njikọ eriri eriri. Ọ bụ ngwaọrụ eji emegharị emegharị eji ejikọ eriri abụọ ma ọ bụ eriri iji mepụta ụzọ nyocha na-aga n'ihu. Ọ na ọtụtụ-eji eriri nnyefe eriri na eriri nkesa osisi. Na ngwa anya eriri ule na mita bụ ihe kachasị eji arụ ọrụ.
1. Optical arụmọrụ: N'ihi na ngwa anya arụmọrụ chọrọ nke eriri optic njikọta, abụọ kasị bụ isi parameters nke ntinye ọnwụ na nloghachi ọnwụ na-bụ-eji.
Ntinye ntinye bụ ọnwụ nke ike ngwa anya dị irè nke njikọ kpatara site na iwebata njikọta. Obere ntinye ntinye, ka mma. Na mkpokọta, ihe achọrọ agaghị abụ karịa 0.5dB. Na ngwa ngwa nke njikọ ahụ, a tụpụrụ ntụtụ elu ahụ ka ọ bụrụ ihe nloghachi buru ibu, n'ozuzu ya na-erughị 25dB.
2. Mgbanwe, ikwughachi
Njikọ fiber optic bụ ngwaọrụ na-agafe agafe. Maka otu ụdị eriri fiber optic, enwere ike iji ya na nchikota ọ bụla ma nwee ike iji ya ugboro ugboro. Ya mere, ọnwụ ndị ọzọ ewepụtara bụ ihe na-erughị 0.2 dB.
3. Ike ọdụdọ
Maka ezigbo njikọ fiber optic, a na-achọkarị ike ọdụdọ ka ọ bụrụ ihe na-erughị 90N.